ဧဒင်ရိပ်မြုံ၏လုပ်ငန်းများ – Welcome to Eden Centre
ဧဒင်မသန်စွမ်းသက်ငယ်များပြုစုရာရိပ်မြုံသည် ၂၀၀၀ ပြည်နှစ် ဧပြီလ (၁၈) ရက်နေ့တွင် စတင်တည်ထောင်ခဲ့ သော မသန်စွမ်းကလေးများ၏လိုအပ်နေသောဝန်ဆောင်မှုအမျိုးမျိုးကိုပေးရန်ရည်ရွယ်ပြီးဖွင့်လှစ်ခဲ့သည့် ပရဟိ တလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ လက်ရှိတွင် အမှတ် (၅၆)၊ ၀ါဦး (၄) လမ်း၊ ဖော့ကန်ရပ်ကွက်၊ အင်းစိန်မြို့တွင် တည်ရှိနေပြီး မသန်စွမ်းကလေး (၂၃၀) ကျော်ကို နှစ်စဉ်လက်ခံကာ ဝန်ဆောင်မှုပေးနေသည့်အဖွဲ့အစည်းဖြစ် ပါသည်။ ထို့ပြင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတွင်သာကမ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးနှင့် ချင်းပြည်နယ်တို့တွင်ရှိသော မသန်စွမ်းကလေးများအနေဖြင့် ပင်မပညာရေးကို အခြားကလေးများနည်းတူရရှိနိုင်ရန်အတွက် အကူအညီပေး ဆောင်ရွက်ပေးနေပါသည်။ ဧဒင်ရိပ်မြုံသည် ဤနှစ်ပေါင်း (၂၀) အတွင်းအဆင့်ဆင့်တိုးတက်ပြီး မသန်စွမ်းသူ များအတွက်လုပ်ငန်းများကိုလုပ်ဆောင်ပေးနေပါသည်။ အစပထမတွင် ကလေးများအတွက်လိုအပ်နေသော ဝန်ဆောင်မှုများပေးခြင်းဖြင့်စခဲ့ပြီး၊ နောက်တွင် မသန်စွမ်းမှုအသိပညာပေးသင်တန်းများပြုလုပ်ခြင်း၊ စာစောင် များထုတ်ဝေခြင်းတို့ကို စီမံကိန်းမျိုးစုံရေးဆွဲအကောင်အထည်ဖေါ်ခြင်းဖြင့် တိုးချဲ့လုပ်ဆောင်ပေးနေပါသည်။ ထို့ပြင် ၂၀၁၄ ခုျွှစ်မှစပြီး သုတေသနများပြုလုပ်ကာ မသန်စွမ်းဆိုင်ရာဥပဒေများ၊ မူဝါဒများပေါ်ပေါက်လာရန် အတွက် ကိုယ်စားပြုပြောဆိုပေးခြင်း၊ အရေးဆိုခြင်းကို တက်ကြွစွာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေပါသည်။
ပရဟိတလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်သည့် ဧဒင်ရိပ်မြုံသည် ၂၀၀၀ ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်သော်လည်း လူမှုဝန်ထမ်း ဦးစီးဌာနမှ ၂၀၀၅ ခုနှစ် မေလ (၂၀) ရက်နေ့ရောက်မှသာ ပထမအဆင့်ဖြင့် အသိအမှတ်ပြုလက်ခံပေးခဲ့ပါ သည်။ ယခုအခါ ဒုတိယအတင့်သို့တိုးမြှင့်အသိအမှတ်ပြုပေးပြီဖြစ်ပါသည်။ ထို့ပြင် ၂၀၁၅ ခုနှစ်ဇွန်လ (၅) ရက်နေ့တွင် ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနမှ တစ်နိုင်ငံလုံးတွင် လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်ခွင့်ရှိသည့် ပြည်တွင်းအရပ်ဖက် ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအဖြစ် အသိအမှတ်ပြုမှတ်ပုံတင်ပေးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။ (အသင်းအဖွဲ့မှတ်ပုံတင်အမှတ် မှာ – (၁ / ပြည်တွင်း / ၀၁၅၆) ဖြစ်ပါသည်။
ဧဓင်ရိပ်မြုံ၏အမြင့်ဆုံးသောဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်သည် ဧဒင်ကြီးကြပ်ရေးကော်မတီတွင်ရှိပြီး တစ်နှစ်တွင် (၂) ခါပုံမှန် အစည်းအဝေးကျင်းပနေပါသည်။ ထိုကော်မတီတွင် မိဘဆရာအသင်းမှလူကြီးများ၊ အငြိမ်းစားလူမှုဝန်ထမ်းအ ရာရှိများ၊ ရပ်မိရပ်ဖမှခေါင်းဆောင်များ၊ မသန်စွမ်းသူများပါဝင်ကြပြီး စုစုပေါင်းအဖွဲ့ဝင် (၁၅) ယောက်ရှိပါသည်။
ဧဒင်ရိပ်မြုံကြီးကြပ်ရေးကော်မတီသည် တစ်နှစ် (၂) ခါပုံမှန်အစည်းအဝေးထိုင်ကြပါသည်။ လိုအပ်နေသော အခြားဆပ်ကော်မတီများကိုလည်း လိုအပ်သလိုဖွဲ့စည်းထားပါသည်။ (ဥပမာ – ဘဏ္ဍာရေးနှင့်ပိုင်ဆိုင်မှုဆပ် ကော်မတီ၊ ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ရေးဆပ်ကော်မတီ၊)
ဧဒင်ရိပ်မြုံ၏ဌာနအသီးသီးမှမန်နေဂျာများ၊ တာဝန်ခံများဖြင့် စီမံရေးအဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းထားပြီး အပတ်စဉ်ပုံမှန် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ကာ ဧဒင်ရိပ်မြုံ၏ နေ့စဉ်လိုအပ်ချက်များကို အတူတကွပူးတွဲတာဝန်ယူဆောင်ရွက်နေ ကြပါသည်။ ထို့အပြင် လစဉ်ဝန်ထမ်းအစည်းအဝေးကိုလည်းပုံမှန်ကျင်းပပေးနေပါသည်။ အခြားအရေးပေါ် ကိစ္စရပ်များပေါ်ပေါက်လာပါကလည်း လိုအပ်လျှင်လိုအပ်သလိုစီစဉ်လုပ်ဆောင်နေပါသည်။
ဧဒင်ရိပ်မြုံ၏အဓိကလုပ်ငန်းမှာ ကိုယ်အင်္ဂါနှင့် ဉာဏ်ရည်မသန်စွမ်းကလေးများလိုအပ်နေသော အထူးပညာရေး၊ ပြန်လည်ထူထောင်ရေးနှင့် လူမှုရေးဝန်ဆောင်မှုများလုပ်ဆောင်ပေးရန်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုဝန်ဆောင်မှုများကို ဧဒင် ရိပ်မြုံ ကျောင်းတွင်ဆောင်ရွက်ပေးနေပါသည်။
ဧဒင်ရိပ်မြုံအနေဖြင့် မသန်စွမ်းကလေးနှင့် အခြားမသန်စွမ်းထုတစ်ရပ်လုံးအတွက် ထိရောက်သောလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် အဓိကလုပ်ငန်းကြီး (၄) ရပ်ချမှတ်ကာ လုပ်ငန်းများကို လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နေပါ သည်။ ထိုလုပ်ငန်းကြီး (၄) ရပ်မှာ –
ရည်ရွယ်ချက်။ မသန်စွမ်းကလေးများအနေဖြင့် သူတို့၏တိုးတက်နိုင်မှုအလားအလာအမြင့် ဆုံးအထိရရှိနိုင်ရန်အတွက် လိုအပ်နေသောဝန်ဆောင်မှုများကို အရည်အချင်းပြည့်မီ စွာဖြင့်ပေးရန်နှင့် မိသားစုဝင်များနှင့်ပြုစုစောင့်ရှောက်သူများကို လိုအပ်သောအခြေခံ နည်းပညာများ၊ ဗဟုသုတများ၊ အတွေ့အကြုံများကိုပံ့ပိုးပေးခြင်းအားဖြင့် မသန်စွမ်း ကလေးများကို အပြည့်အဝပံ့ပိုးပေးချင်းအားဖြင့် ပြည့်စုံသည့်ဖက်စုံဝန်ဆောင်မှုပေး ရန်တို့ဖြစ်သည်။
အကြောင်းရင်း။ မသန်စွမ်းကလေးများအား အကောင်းဆုံးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာရန်၊ လူမှုဝန်း ကျင်တွင်ဝင်ဆန့်လာနိုင်ရန်နှင့် မိမိဘဝတန်ဖိုးကိုသိရှိပြီးသိက္ခာရှိစွာရှင်သန်လာနိုင်ရန် တို့အတွက် မိဘများနှင့် မိသားစုဝင်များ၏အခန်းကဏ္ဍသည် အလွန်အရေးကြီးပါ သည်။ သို့သော်ယနေ့မြန်မာနိုင်ငံ၏အခြေအနေသည် ထိုမိဘများအနေဖြင့် မသန်စွမ်း ကလေးများကိုအကောင်းဆုံးပြုစုစောင့်ရှောက်တတ်ရန်အတွက် ပံ့ပိုးပေးမည့် အစီ အစဉ်မရှိသလောက်ရှားပါးနေပါသေးသည်။ ယနေ့မြန်မာနိုင်ငံတွင် မမွေးမီနှင့်မွေးဖွား ပြီးချိန်များတွင် မသန်စွမ်းဖြစ်မှုကို စနစ်တစ်ကျစမ်းသပ်စစ်ဆေးသည့်စနစ်မရှိသေးပါ။ လက်ရှိကျန်းမာရေးဝန်ထမ်း များမှာလည်း မသန်စွမ်းမှုအခြေအနေစမ်းသပ်နိုင်ရန် ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်အတွေ့အကြုံ အလုံအလောက်မရှိကြသေးပေ။ ထိုးကြောင့်မိဘများ အနေဖြင့် မိမိတို့သားသမီးများ ၏မသန်စွမ်းမှုကို ကြိုတင်သိရှိခြင်းမရှိဖြစ်နေပါသည်။ ထင်သာမြင်သာရှိလာမှသာ (သို့) အချိန်နှောင်းမှသာ သိလာလေ့ရှိပါသည်။ ထိုသို့ မိဘများအား မသန်စွမ်းမှုနှင့် ပတ်သက်ပြီး စောလျှင်စွာ ကြိုတင်သိရှိ၊ စမ်းသပ်တတ် ရန်အတွက် သင်တန်းပေးနိုင်ခြင်းမရှိပါ။ ထို့ကြောင့် မိဘများအနေဖြင့် စောစောစီးစီး မိမိတို့မသန်စွမ်းကလေးများအတွက် ဝန်ဆောင်မှုရယူပေးနိုင်ခြင်းမရှိဖြစ်နေပါသည်။ လိုအပ်သောသတင်းအ ချက်အလက်များလည်း လက်လှမ်းမီရရှိနိုင်ခြင်းမရှိပါ။ မသန်စွမ်းကလေးတစ်ဦးရှိလာ ခြင်းဖြင့် ပိုမိုလာသည့်စိတ်ပင်ပန်းဆင်းရဲမှုများအားလုံး မိခင် သို့မဟုတ် အဓိကပြုစု စောင့်ရှောက်သူများကသာ ရင်ဆိုင်ခံစားနေရလေ့ရှိပါ သည်။
မှန်ကန်တိကျသောဝန်ဆောင်မှုများအချိန်မှီရရှိနိုင်မှသာ မသန်စွမ်းကလေး များအနေဖြင့် အကောင်းဆုံးဖွံ့ဖြိုးလာနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ မသန်စွမ်းကလေးအဖက် ဖက်မှ အကောင်းဆုံးဖွံ့ဖြိုးမှုရရှိလာနိုင်ရန်အတွက် အားလုံးပါဝင်သည့် ဥသုံဝန်ဆောင် မှု ဥပမာ-အိမ်ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေ၊ လိုအပ်သည့်ဝန်ဆောင်မှုအမျိုးအစား၊ ဆေး ၀ါးကုသမှုနှင့်ပညာရေးဝန်ဆောင်မှု စသည်တို့ ပေးနိုင်မှသာရရှိနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ မသန်စွမ်းကလေးတစ်ဦးချင်းစီကို ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူများမှ စနစ်တကျစမ်းသပ်စစ် ဆေးပေးပြီး လိုအပ်သောကုသမှုအစီအစဉ်ကို စနစ်တကျရေးဆွဲပေးနိုင်မှသာ အ ကောင်းဆုံးတိုးတက်မှုရရှိလာနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုသို့လိုအပ်နေသော ပြန်လည် ထူထောင်ရေးဝန်ဆောင်မှုများ၊ အထူးပညာရေးဝန်ဆောင်မှုများနှင့် လူမှုရေးဝန် ဆောင်မှုများရရှိမှသာ မသန်စွမ်းကလေးအနေဖြင့် မိမိကိုယ်ကိုယ်ယုံကြည်စိတ်ချမှု၊ ပိုမိုသွက်လက်ချောမွေ့သောသွားလာလှုပ်ရှားမှု၊ ပိုမိုထိရောက်သောပြောဆိုဆက် သွယ်မှု၊ လူမှုရေးဆက်ဆံမှုနှင့် အပြုအမူဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်မှုများတိုးတက်လာမည်ဖြစ် ပါသည်။
ဧဒင်ရိပ်မြုံပရဟိတလုပ်ငန်းမှ အကျိုးပြုပေးသောသူများ၏ဦးရေစာရင်း –
Senior management (MD & PCs)
Admin staff (Including HR staff)
Conductive Education Department
Other support staff (Sport, Social Worker, Chaplin, Inclusive Education unit, etc.)
Chin Community Based Rehabilitation project (ခ်င္းစီဘီအာရ္ စီမံခ်က္၀န္ထမ္း)
Nothing about us without all of us (LIFT) project (ခ်င္း LIFT စီမံခ်က္၀န္ထမ္းအင္အား)
Mainstreaming Early Child Care Development project (OSM) မူႀကိဳစီမံခ်က္
မှတ်ချက်။ မသန်စွမ်းဝန်ထမ်း (၇) ဦး (က-၅၊ မ-၂)၊ ၁၀% ပါဝင်သည်။
1. ရှေးဦး အရွယ်ကလေးသူငယ်ပြုစုစောင့်ရှောက်ခြင်း
9. အားပြုကရိယာ၊ သင်ထောက်ကူပစ္စည်းများပံ့ပိုးပေးခြင်း
10. မိဘနှင့် ပြုစုသူများအတွက် အခြေခံပြုစုစောင့်ရှောက်နည်းသင်တန်းပေးခြင်း
၁။ ပြန်လည်ထူထောင်ရေး (ပီတီ)
ပြန်လည်ထူထောင်ရေး (ပီတီ) ဝန်ဆောင်မှုသည် ကလေးများ၏ အကြီးစားလှုပ်ရှားမှုများတိုးတက် လာရန်အတွက် သင့်တော်သောလေ့ကျင့်ခန်းများ ကို ရွေးချယ်လုပ်ဆောင်ပေးပါသည်။ ထိုသို့လုပ် ဆောင်ပေးရန်အတွက် အကြောအဆစ်ကျွမ်းကျင် ပညာရှင်များမှ ဆောင်ရွက်ပေးနေပါသည်။ လက်ရှိ တွင် ပညာရှင်လေးယောက်နှင့်အကူတစ်ယောက်မှ
ဝန်ဆောင်မှုပေးနေပြီး စာသင်ဆရာမများ၊ လူမှုရေး အရာရှိနှင့် အခြားကျွမ်းကျင်သူများစုပေါင်းကာ ဝန် ဆောင်မှုများကို ပေးနေပါသည်။
ဧဒင်ရိပ်မြုံတွင် မိဘဗဟိုပြုဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်းကို စတင်လုပ်ဆောင်နေပါသည်။ သက်ဆိုင်သည့်မိဘ
များအား မိမိတို့ကလေးကို စနစ်တစ်ကျပြုစုတတ် ရန်နည်းပညာသင်ပေးပြီး ဆရာမများနှင့်ပူးပေါင်း ကာ ကလေးများအားလက်တွဲဝန်ဆောင်မှုပေးနေ ပါသည်။ မိဘများ၏ပူးပေါင်းမှုမရှိပါက ရှည်မှန်းထားသောပန်းတိုင်ရောက်ရှိမည်မဟုတ်ပါ။ မသန်စွမ်း ကလေးများကိုယ်တိုင်သာမက မိဘများ၊ မိသားစုဝင်များမှလည်း မသန်စွမ်းကလေးတစ်ဦးနှင့်ပတ် သက်နေရမှုကို ဝမ်းမြောက်စွာလက်ခံတန်ဖိုးထားရန်လိုပါသည်။ ထိုအရာကို ရည်မှန်းထားပါသည်။
၂။ ပြန်လည်ထူထောင်ရေး (အနုစိတ်ဝန်ဆောင်မှု)
ဧဒင်ရိပ်မြုံတွင်ပေးနေသည့်ဝန်ဆောင်မှုနောက်တစ် ခုမှာ အနုစိတ်လှုပ်ရှားမှုဖြစ်ပါသည်။ အထူးသဖြင့် လက်ချောင်းလှုပ်ရှားမှုများ၊ လက်ဖြင့်ဆောင်ရွက်နေ သောအရာများ၊ အာရုံခံစားမှုနှင့်သက်ဆိုင်သောအ ရာများနှင့် နေ့စဉ်တစ်ဓူဝလှုပ်ရှားဆောင်ရွက်မှုများ တွင်တိုးတက်လာရန် လေ့ကျင့်ဆောင်ရွက်ပေးပါ သည်။ ဤဝန်ဆောင်မှု၏ရည်ရွယ်ချက်များမှာ –
 ထိရောက်သောလှုပ်ရှားဆောင်ရွက်မှု ပြုလုပ်
 ကစားချိန်နှင့်နားချိန်ကို ဟန်ချက်ညီစွာလုပ် ေ
 ကလေးတတ်ဦးချင်းစီ၏ သင်ယူနိုင်စွမ်းရည်ကို
 မိဘများ၊ ပြုစုစောင့်ရှောက်သူများအား ကျွမ်းကျင်မှု၊ အသိပညာပေးပြီး အမြင်ဖွင့်ပေးရန်။
ရေကုထုံးဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်းကို ဧဒင်ရိပ်မြုံ တွင် လွန်ခဲ့သော (၉) နှစ်က စတင်နိုင်ခဲ့ပါ သည်။ ဧဒင်ရိပ်မြုံတွင် ရေကုထုံးကန်သေး သေးတစ်ခုရှိပါသည်။ ကလေးတစ်ဦးချင်းစီ အတွက်သော်လည်းကောင်း၊ အုပ်စုငယ်ဖြင့် သော်လည်းကောင်း မသန်စွမ်းကလေးများ အတွက်အသုံးပြုနေပါသည်။ လက်ရှိရင်ဆိုင် နေရသောစိန်ခေါ်ချက်ကြီးတစ်ခုမှ ထိုရေကုထုံး ကန်ကို နိုင်ငံတကာစံချိန်ရှိသော ကုထုံးကန်ဖြစ် ရန် ထိမ်းသိမ်းရခက်နေခြင်းဖြစ်သည်။ ရေကုထုံးသည် မသန်စွမ်းကလေးများ၏ပြန်လည်ထူထောင် ရေး၊ ပြုစုပျိုးထောင်ရေးကဏ္ဍတွင် ထိရောက်မှုရှိသော ဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
၄။ ရှေးဦးအရွယ် ကလေးသူငယ်ပြုစုသောင့်ရှောက်ခြင်းအစီအစဉ်၊
ဧဒင်ရိပ်မြုံတွင် ရှေးဦးအရွယ်ကလေးသူငယ် ပြုစု ပျိုးထောင်ပေးခြင်းအစီအစဉ်ကိုလုပ်ဆောင်ခဲ့သည် မှာ ဆယ်နှစ်ကျော်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ ဤအစီအစဉ်၏ အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာ ကလေးများ၏တိုးတက်မှု စံနုန်းကိုမျက်ခြေမပြတ်စောင့်ကြည့်ရန်နှင့် တိုးတက် မှုနှောင့်နှေးနေသောကဏ္ဍအတွက် လိုအပ်သောဝန် ဆောင်မှုကိုစောလျှင်စွာပေးဆောင်ရန်ဖြစ်ပါသည်။
လက်ရှိ ဧဒင်ရိပ်မြုံတွင် အခန်းနှစ်ခန်းဖြင့် ကလေး (၃၀) ဦးကျော်လက်ခံ ဆောင်ရွက်ပေးနေပါသည်။
မသန်စွမ်းကလေးများကို သင် ပေးသည့်အထူးပညာရေးသည် ကျောင်း ပညာရေးနှင့်မတူပါ။ ကလေးတစ်ဦးချင်းစီ ၏သင်ယူနိုင်စွမ်း၊ သင်ယူမှုပုံစံနှင့် သင်ယူ
ရမည့် သီးခြားသင်ရိုးညွှန်းတမ်းများဖြင့် သင်ပေးရပါသည်။ ပညာသင်ယူပိုင်ခွင့် သည် လူသားတိုင်း၏မွေးရာပါအခွင့်အ ရေးတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် သင် ယူသူတစ်ဦးချင်းစီ၏ သင်ယူပိုင်ခွင့်ကို အကောင်းဆုံးဖြည့်ဆည်းပေးရန်လိုအပ် ပါသည်။
ဦးဆောင်လမ်းပြပညာရေးသည် အာရုံ ကြောနှင့်ကြွက်သားလှုပ်ရှားမှုဆိုင်ရာ ပုံမှန်မဟုတ်သည့်အခြေအနေရှိနေသည့်
ကလေးများ (ဥပမာ-သူငယ်နာအကြော တင်း) အား ပညာရေးနှင့် ပြန်လည်ထူ
ထောင်ရေးဝန်ဆောင်မှုပေးသည် နည်း စနစ်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
ဤစီအီးစနစ်ကို ဧဒင်ရိပ်မြုံမှ မိတ်ဖက် အဖွဲ့၏ နည်းပညာပံ့ပိုးမှုဖြင့် ၂၀၁၈ခုနှစ် တွင် မသန်စွမ်းကလေး (၁၂)ဦး၊ အခန်း (၂) ခန်းဖြင့် စတင်လာခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၉-၂၀ ခုနှစ်တွင် အယောက် (၂၀) လက်ခံခဲ့ပြီး နောက်နှစ်များ တွင်လည်း တိုး၍လက်ခံမည်ဖြစ်ပါသည်။
ဧဒင်ရိပ်မြုံသည် မသန်စွမ်းကလေးများ၊ မိသားစုဝင်များ၊ အခြားဆက်စပ်သူများ၏လူမှုရေးကိစ္စများကို ကူညီဆောင်ရွက်ရန်အတွက် လူမှုရေးအရာရှိဝန်ထမ်းတစ်ဦးကို ၂၀၁၁ ခုနှစ် မှစပြီး ခန့်ထားပေးနိုင်ခဲ့ပါ သည်။ ယခင်ကလူမှုရေးနှင့်ပတ်သက်သည့်ဘာသာရပ်ကို မြန်မာနိုင်ငံတွင်မရှိခဲ့သော်လည်း ၂၀၁၀ ခု နှစ်မှစပြီး ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်တွင် ဘွဲ့လွန်ဘာသာရပ်တစ်ခုအနေဖြင့်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။ ဧဒင်ရိပ်မြုံမှ ဝန်ထမ်းတစ်ဦးအား ထိုဘာသာရပ်ကိုတက်ရောက်စေခဲ့ပြီး ဧဒင်ရိပ်မြုံတွင်လူမှုရေးဝန်ဆောင်မှုကို တာ ဝန်ယူဆောင်ရွက်နေပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံသည် တိုးတက်ပြီးနိုင်ငံများကဲ့သို့ အစိုးရမှပံ့ပိုးမှုများမရှိသေးသော်လည်း မသန်စွမ်းမှုသည် လူမှုရေးပြသနာတစ်ခုဖြစ်နေသောကြောင့် မသန်စွမ်းကလေးများနှင့်သူတို့၏မိသားစုဝင်များအား လို အပ်သည်များကို အတတ်နိုင်ဆုံးကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေပါသည်။
ဧဒင်ရိပ်မြုံသ ည်မသန်စွမ်းကလေးများ၏လိုအပ်နေသောဝန်ဆောင်မှုများကို အတတ်နိုင်ဆုံးဖြည့်ဆည်းဆောင် ရွက်ပေးနေသော ပရဟိတလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ အားကစားသည်လည်း မသန်စွမ်းကလေးများ၏ လိုအပ် နေသော ဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်သောကြောင့် ဧဒင်ရိပ်မြုံအနေဖြင့် ပီတီတစ် ယောက်အား မသန်စွမ်းအားကစားအရာရှိအဖြစ်ခန့်အပ်ကာ လိုအပ်သည့်အားကစား ဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုများကိုလုပ်ဆောင်ပေးစေပါသည်။ ဤဝန်ဆောင်မှုကို ကျောင်းတွင်း၊ ကျောင်းပြ င် အားကစားအစီအစဉ်ဟု (၂) မျိုးပြုလုပ်ကာ ရက်ကွက်ရှိအခြားမသန်စွမ်းကလေးများလည်းပါဝင်စေပါ သည်။ ထို့ပြင် ဧဒင်ရိပ်မြုံ၏ မသန်စွမ်းအားကစားအရာရှိသည် မြန်မာနိုင်ငံမသန်စွမ်းအားကစားအဖွဲ့ တွင်လည်း ကူညီပါဝင်ဆောင်ရွက်ပေးနေပါသည်။
လက်ရှိတွင် ဧဒင်ရိပ်မြုံအနေဖြင့် လူတိုင်းအကျုံးဝင်ပညာရေးကို စီမံကိန်းတစ်ခုအနေဖြင့်မဆောင်ရွက် တော့သော်လည်း မသန်စွမ်းကလေးများပင်မပညာရေးကိုခံစားရရှိနိုင်အောင် ဆက်လက်ကူညီဆောင် ရွက်နေဆဲဖြစ်ပါသည်။ ထိုသို့ဆောင်ရွက်ရာတွင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ လက်လှမ်းမီသော မသန်စွမ်းကျောင်းသား/သူများသာမက ကလေးမြို့နယ်၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမှ မသန်စွမ်းသူများ၊ ဟါးခါးနှင့်ထန်တလန်မြို့နယ်၊ ချင်းပြည်နယ်မှ မသန်စွမ်းကျောင်းသား/သူများကိုလည်း ပညာရေးဝန် ကြီးဌာနမှပေးသော ထောက်ပံ့ကြေးများရရှိအောင်ကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေပါသည်။
မသန်စွမ်းကလေးများ၏ကျောင်းအပ်နှံရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ အထောက်အကူပစ္စည်းများရရှိနိုင်ရေးနှင့် စာရေးကရိယာများရရှိနိုင်ရေးတို့ကိုလည်း ဆောင်ရွက်ပေးနေပါသည်။
ဧဒင်မသန်စွမ်းသက်ငယ်များပြုစုရာရိပ်မြုံအနေဖြင့် မသန်စွမ်းကလေးများ၊ အခြားမသန်စွမ်းလောက နှင့်နယ်ပယ်တို့အတွက် တတ်နိုင်သည့်ဖက်မှ အမြဲတမ်းတက်ကြွစွာပါဝင်ဆောင်ရွက်နေပါသည်။
• ဧဒင်ရိပ်မြုံကျောင်းသားဟောင်းအချို့နှင့် အကြီးတန်းမှကျောင်းသူ/သားများအား အကြိုလုပ် ငန်းခွင်သင်တန်းများကို စီစဉ်လုပ်ဆောင်ပေးနေပါသည်။
• မသန်စွမ်းကလေးများ၏အခြေခံကျန်းမာရေးဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုများကို ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ပရဟိတလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေသော မိတ်ဖက်အဖွဲ့များနှင့်ပံ့ပိုးမှုဖြင့် လုပ်ဆောင်ပေးနေပါ သည်။
• ဧဒင်ရိပ်မြုံသို့လာရောက်ပြီးဝန်ဆောင်မှုရယူနေကြသော မသန်စွမ်းကလေးများအားလုံးအဟာ ရဖြည့်စွက်စာကို ပြင်ဆင်ကြွေးမွေးပေးနေပါသည်။
• ဧဒင်ရိပ်မြုံအနေဖြင့် မသန်စွမ်းကလေးများ၊ မိသားစုဝင်များပါဝင်သည့် လေ့လာရေးခရီစဉ်များ ကို အတန်းလိုက်သော်လည်းကောင်း၊ ဝန်ဆောင်မှုအစီအစဉ်အလိုက်သော်လည်းကောင်း၊ စု ပေါင်းအစီအစဉ်ဖြင့်သော်လည်းကောင်း လုပ်ဆောင်ပေးနေပါသည်။
• အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမသန်စွမ်းသူများနေ့အခန်းအနားကို အခြားမသန်စွမ်းကျောင်းများနှင့်စု ပေါင်းပြီး နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းကျင်းပနိုင်ရန် ဧဒင်ရိပ်မြုံမှကမကထလုပ် ဆောင်ရွက်နေပါသည်။
• ဧဒင်ရိပ်မြုံသည် မသန်စွမ်းသူများ၏အခွင့်အရေး၊ သိက္ခာများ၊ အကျုံးဝင်မှုနှင့် ကဏ္ဍတိုင်းတွင် ထည့်သွင်းဆောင်ရွက်လာနိုင်ရေးတို့အတွက် အရေးဆိုခြင်း၊ တိုက်တွန်းခြင်းတို့ကိုလည်း မ သန်စွမ်းဝန်ထမ်းများ၊ ကျောင်သားဟောင်းများနှင့်ပူးပေါင်းပြီးဆောင်ရွက်လေ့ရှိပါသည်။
• ဧဒင်ရိပ်မြုံတွင် မိဘဆရာအသင်းကိုကနဦးကတည်းကဖွဲ့စည်းထားပါသည်။ ဧဒင်ရိပ်မြုံကြီး ကြပ်ရေးကော်မတီတွင်လည်း မိဘဆရာအသင်းမှတာဝန်ရှိသူများပါဝင်နေပါသည်။
• ဧဒင်ရိပ်မြုံတွင် လစဉ်လတိုင်း မသန်စွမ်းကလေးများ၏မွေးနေ့ကို စုပေါင်းကျင်းပပေးလေ့ရှိပါ သည်။ ထို့ပြင် ဝန်ထမ်းများ၏မွေးနေ့ကိုလည်း ဝန်ထမ်းများစုပေါင်းပြီး ကျင်းပပေးလေ့ရှိပါ သည်။ အချို့မိဘများသည် မိမိတို့၏သားသမီးများ၏မွေးနေ့ကို ကျောင်းတွင်လာရောက်ပြီး ကျင်းပလုပ်ပေလေ့ရှိပါသည်။
• ဧဒင်ရိပ်မြုံသည် သန်တမံအဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းပေးထားပါသည်။ သူတို့သည် လိုအပ်သလို မသန် စွမ်းသူများ၏ မွေးရာပါအခွင့်အရေးနှင့် သိက္ခာအတွက် အရေးဆိုပေးလေ့ရှိပါသည်။
၁၀။ မိဘနှင့်မိသားစုဝင်များ၏ မသန်စွမ်းဆိုင်ရာအမြင်ဖွင့်ပေးခြင်း၊ စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ပေးခြင်း။
ဧဒင်ရိပ်မြုံအနေဖြင့် လွန်ခဲ့သော (၂) နှစ်မှစပြီး မသန်စွမ်းကလေးများအတွက်ဝန်ဆောင်မှုပေးနေ သည့်ပုံစံကို ကလေးဗဟိုပြုချဉ်းကပ်နည်းမှ မိသားစုဗဟိုပြုချဉ်းကပ်နည်းသို့ တစ်ဖြည်းဖြည်းစတင် ပြောင်းလဲနေပါသည်။ ဧဒင်ရိပ်မြုံအနေဖြင့် မသန်စွမ်းကလေးများ၏ဖွံ့ဖြိုးမှုအမြင့်ဆုံးအထိ တိုးတက် လာရန်အတွက် အဖက်ဖက်မှစဉ်းစားပြီး အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ဆောင်နေပါသည်။
ထိုသို့လုပ်ဆောင်ရာတွင် မိဘများ၊ မိသားစုဝင်များ၏အခန်းကဏ္ဍကို အတတ်နိုင်ဆုံးမြှင့်တင်ပေးရန် အတွက် ယခင်ကထက်ပိုပြီး ကြိုးစားလုပ်ဆောင်နေပါသည်။ ဧဒင်ရိပ်မြုံသို့အကြောင်းအမျိုးမျိုးဖြင့် ရောက်ရှိလာကြသောမသန်စွမ်းကလေးများသည် ကျောင်းတွင်နာရီပိုင်းသာနေပြီးဝန်ဆောင်မှုရယူ နေကြသော်လည်း သူတို့ဘဝ၏အချိန်အများစုသည် မိသားစုနှင့်သာနေထိုင်နေကြရပါသည်။ ထို့ ကြောင့်မိသားစုများကို အမြင်ဖွင့်ပေးခြင်း၊ စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ပေးခြင်းနှင့် မိမိသားသမီးများ အတွက် တာဝန်ယူမှုပိုမိုရှိလာရန်အားပေးကူညီခြင်းများကို ယခင်ကထက်ပိုမိုလုပ်ဆောင်ရန်ရည်မှန်း ထားပါသည်။
အခြေခံပြုစုနည်းသင်တန်းများကို မိဘများအတွက် ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်ပေးနေသလို ကလေးများမှ အမြင့်ဆုံးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုရရှိခံစားနိုင်ရန်အတွက် နည်းလမ်းမျိုးစုံဖြင့် မိသားစုနှင့်ပူးပေါင်းပြီးဆောင် ရွက်နေပါသည်။
ရည်ရွယ်ချက်။ ရပ်မိရပ်ဖ၊ မိဘပြည်သူများအား မသန်စွမ်းသူများ၏ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းရည် နှင့် သူတို့၏ဘဝများကို တန်ဖိုးထားလက်ခံပေးနိုင်ရန်အတွက် အသိပညာပေးခြင်းပြု လုပ်ပေးရန်လိုပါသည်။ ပြည်သူများမှမသန်စွမ်းမှုကိုပိုမိုသိရှိလက်ခံလာလေ မသန်စွမ်း သူများလူမှုအဖွဲ့အစည်းအတွင်းတွင် ပိုမိုဝင်ဆန့်လာကာ ပြည်သူနှင့်တစ်သားတည်း ဖြစ်လာမည်ဖြစ်ပါသည်။
အကြောင်းရင်း။ ဤရပ်ရွာလူထုဖွံ့ဖြိုးမှုအစီအစဉ်အကောင်အထည်ဖေါ်ဆောင်နိုင်ရန်အတွက် အောက်ပါအစီအစဉ်များကို ဆောင်ရွက်နေပါသည်။
 ကိုစားပြု အရေးဆိုပေးခြင်းအစီအစဉ်များ
 မသန်စွမ်းသူများ၊ မသန်စွမ်းအဖွံ့အစည်းများ၏ စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ပေးခြင်း ဆိုင်ရာစီမံကိန်း
 မသန်စွမ်းမှုဆိုင်ရာအသိပညာပေး၊ အမြင်ဖွင့်သင်တန်းများ
ဧဒင်ရိပ်မြုံအနေဖြင့် ပထမဦးဆုံး ရပ်ရွာအခြေပြုပြန်လည်ထူထောင်ရေးစီမံကိန်းကို အေအေအာရ်၊ ဂျပန်၏ငွေ ကြေးပံ့ပိုးမှုဖြင့် ၂၀၀၇ ခုနှစ်တွင် လှိုင်သာယာမြို့နယ်တွင်စတင်ခဲ့ပါသည်။ အမှန်တကယ်တွင် ဧဒင်ရိပ်မြုံပရဟိ တလုပ်ငန်းကိုပင်လျှင် အိမ်တိုင်ယာရောက်ဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်းဖြင့် ၁၉၉၉ ခုနှစ်ကစပြီးလုပ်ဆောင်လာခဲ့ပါ သည်။ တနည်းအားဖြင့် ဧဒင်ရိပ်မြုံကို ရပ်ရွာအခြေပြုပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းဖြင့်စတင်ခဲ့သည်ဟုပြော၍ ရမည်ထင်ပါသည်။ ထိုအချိန်မှစပြီးဧဒင်ရိပ်မြုံအနေဖြင့် ဤရပ်ရွာအခြေပြုပြန်လည်ထူထောင်ရေးစီမံကိန်းကို မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများ၏ပံ့ပိုမှုဖြင့် မြန်မာပြည်အနှံ့အကောင်အထည်ဖေါ်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်မှာ ယနေ့အထိ ဖြစ်ပါသည်။ အချိုါ်စီမံကိန်းများသည် (၂) နှစ်သာကြာခဲ့သော်လည်း အချို့စီမံကိန်းများသည် (၄) နှစ်ကျော်ကြာ ခဲ့ပါသည်။ ယနေ့အထိ ဧဒင်ရိပ်မြုံအနေဖြင့် ရပ်ရွာအခြေပြုပြန်လည်ထူထောင်ရေးစီမံကိန်း (၈) ခု အကောင်အ ထည်ဖေါ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး လက်ရှိတွင် စီမံကိန်း (၁) ခုလုပ်ဆောင်နေပါသည်။
ဧဒင်ရိပ်မြုံသည် ဂျာမဏီနိုင်ငံမှ မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သော Welthungerhilfe (WHH) ၏ ငွေကြေး ပံ့ပိုးမှုဖြင့် လူတိုင်းအကျုံးဝင်ပညာရေးစီမံကိန်းကို ၂၀၀၇ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၄ ခုနှစ်အထိ ဆက်တိုက် (၁၁) နှစ်ကြာ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းတွင် အကောင်အထည်ဖေါ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ဤကာလအတွင်း မသန်စွမ်း သူများ၏ပညာရေးရယူခံစားနိုင်ခွင့်နှင့်ပတ်သက်ပြီး သုတေသန (၂) ခုလုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ပါသည်။ ထိုသုတေသန များကို လူတိုင်းအကျုံးဝင်ပညာရေးနှင့်သက်ဆိုင်သည့်ဥပဒေများ၊ မူဝါဒများ ပေါ်ပေါက်လာနိုင်ရေးအတွက် အရေးဆိုခြင်းများ၊ တိုက်တွန်းခြင်းများလုပ်ဆောင်ရာတွင် အထောက်အထားအဖြစ်အသုံးပြုလာခဲ့ပါသည်။ ဧဒင်ရိပ်မြုံမှ အကောင်အထည်ဖေါ်ဆောင်ရွက်နေသော လူတိုင်းအကျုံးဝင်ပညာရေးစီမံကိန်းများသည် မြန်မာ နိုင်ငံအတွင်းတွင် အရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများမှအကောင်အထည်ဖေါ် ဆောင်ရွက်သော တစ်ခုတည်းသောစီမံ ကိန်းဖြစ်ပါသည်။
၃။ မသန်စွမ်းမှုကို ပင်မလုပ်ငန်းများတွင်ထည့်သွင်းလုပ်ဆောင်လာစေရေးစီမံချက်များ။
ဧဒင်ရိပ်မြုံအနေဖြင့် မသန်စွမ်းမှုကို ကဏ္ဍတိုင်း၊ နယ်ပယ်တိုင်းတွင် ထည့်သွင်းစဉ်းစားလုပ်ဆောင်လာရန်အ တွက် စီမံကိန်းများရေးဆွဲကာ အကောင်အထည်ဖေါ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ပြည်တွင်းပြည်ပ အရပ်ဖက်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများ၊ အစိုးရဌာနများ၊ ဘာသာရေးဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများ၊ မသန်စွမ်းသူများအားဝန်ဆောင်မှုပေး သည့်လုပ်ငန်းကို စတင်လုပ်ကိုင်ရန် ကြိုးစားနေသူများအား အခြေခံပြုစုနည်းသင်တန်းများ၊ အမြင်ဖွင့်သင်တန်း များကို ပို့ချပေးနေပါသည်။
၄။ မသန်စွမ်းသူများ၊ ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုးအဖွဲ့မှားနှင့် မသန်စွမ်းအဖွဲ့အစည်းများအတွက် စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်သင်တန်းပေးခြင်း။
ဧဒင်ရိပ်မြုံသည် မသန်စွမ်းမှုဆိုင်ရာစီမံကိန်းများအကောင်အထည်ဖေါ်တိုင်း မသန်စွမ်းသူများ၏ ကိုယ့် အားကိုယ်ကိုးအဖွဲ့များ၊ မသန်စွမ်းသူများ၏အဖွဲ့များဖွဲ့စည်းပေးခြင်းကို စီမံကိန်း၏လုပ်ငန်းတစ်ရပ်အ နေဖြင့် အမြဲတမ်းဆောင်ရွက်နေပါသည်။ လက်ရှိတွင် ဧဒင်ရိပ်မြုံသည် ပြည်နယ်အဆင့်မသန်စွမ်းအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းနိုင်ရန်လိုအပ်သည်များကို ကူညီဆောင်ရွက်နပါသည်။ ဆက်လက်ပြီး ခရိုင်အဆင့်၊ မြို့နယ်အ ဆင့်မသန်စွမ်းအသင်းအဖွဲ့များလည်း ဖွဲ့စည်းနိုင်ရန်ကူညီဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
ဧဒင်ရိပ်မြုံအနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံသားမသန်စွမ်းပြည်သူများ၏အခွင့်အရေးတန်းတူရရှိနိုင်မှုနှင့် သိက္ခာရှိ စွာလူမှုအဖွဲ့အစည်းအတွင်းတွင်ရှင်သန်နိုင်ရေးတို့အတွက် မြန်မာနိုင်ငံမသန်စွမ်းသူများ၏အသင်းချူပ် ၏အခန်းကဏ္ဍကို မြှင့်တင်ပေးရန်အရေးကြီးသည်ဟုခံယူပါသည်။
၅။ မသန်စွမ်းမှုအမြင်ဖွင့်ခြင်း၊ အတားအဆီးလျှော့ချခြင်းနှင့် အခြားလှုပ်ရှားမှုများ။
ဧဒင်ရိပ်မြုံသည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် မသန်စွမ်းမှုဆိုင်ရာလူမှုရေးအမြင် (Social Model of Disability) ကိုစတင်ဖြန့်၊ ပို့ချသောအဖွဲ့ဖြစ်ပါသည်။ ၂၀၀၇ ခုနှစ်နောက်ပိုင်းတွင် မသန်စွမ်းဆိုင်ရာစီမံကိန်းများ ရေးဆွဲအကောင်အထည်ဖေါ်သည့်အခါတိုင်း မသန်စွမ်းမှုဆိုင်ရာလူမှုရေးအမြင် (Social Model of Disability) ကိုအခြေခံပြီးအမြဲလုပ်ဆောင်လာခဲ့ပါသည်။ ဧဒင်ရိပ်မြုံအနေဖြင့်အကောင်အထည်ဖေါ် ခဲ့သည့်စီမံကိန်းအချို့များမှာ ရပ်ရွာအခြေပြုပြန်လည်ထူထောင်ရေးစီမံကိန်း၊ လူတိုင်းအကျုံးဝင်ပညာ ရေးစီမံကိန်း၊ မသန်စွမ်းမှုနှင့်အကျုံးဝင်မှုဆိုင်ရာစီမံကိန်းများကို အကောင်အထည်ဖေါ်ခဲ့ပါသည်။
မသန်စွမ်းမှုကို ပြည်သူလူထုမှ အမြင်သစ်ရှုထောင့်ဖြင့်သိမြင်လာနိုင်ရန်အတွက် နည်းမျိုးစုံဖြင့်လုပ် ဆောင်နေပါသည်။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမသန်စွမ်းသူများနေ့ကို နေရာတိုင်းတွင်သော်လည်းကောင်း၊ ဘာသာရေးအဖွဲ့အစည်းများမှလည်းကောင်း ကျင်းပနိုင်ရေးကိုလည်း လုပ်ဆောင်နေပါသည်။
ရည်ရွယ်ချက်။ အောက်ခြေအဆင့်မှစပြီး အမျိုူသားအဆင့်အထိ မသန်စွမ်းမှုကိုပံ့ပိုးပေးမည့် အစီအစဉ်များကို စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ပေးခြင်းနှင့် အားသန်စေခြင်း၊ မသန်စွမ်းသူ များ၏လိုအပ်နေသောဝန်ဆောင်မှုများ အပြည့်အဝပေးနိုင်ရန်အတွက် အသိပညာပေး လှုံ့ဆော်မှုပေးခြင်း၊ မသန်စွမ်းမှုဆိုင်ရာသင်တန်းများပြုလုပ်ပေးခြင်း၊ သုတေသနများ ပြုလုပ်ခြင်း၊ အကျုံးဝင်သက်ဆိုင်သူများအချင်းချင်းချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှုမြှင့်တင် ပေးခြင်းနှင့် ကိုယ်စားပြုတောင်ဆိုပေးခြင်းများ လုပ်ဆောင်ပေးနေပါသည်။
အကြောင်းရင်း။ မသန်စွမ်းကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးမှုအစီအစဉ် အောင်မြင်ရန်အတွက်အောက်ပါလုပ်ငန်း များကိုဆောင်ရွက်နေပါသည်။
 စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် အရင်းအမြစ်များကိုတည်ဆောက်ခြင်း
 သုတေသနနှင့် အသစ်အဆန်းများပြုလုပ်ပေးခြင်း
 ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခြင်းနှင့် သင်ယူမှုအခွင့်အလမ်းဖန်တီးပေးခြင်း
 ကွန်ယက်ချိတ်ပေးခြင်းနှင့် မိတ်ဖက်အဖွဲ့များနှင့်ဆက်သွယ်မှုမြှင့်တင်ခြင်း
 မသန်စွမ်းဆိုင်ရာဥပဒေများ၊ မူဝါဒများပိုမိုကောင်မွန်လာရန်လုပ်ဆောင်ခြင်း
၁။ စွမ်းရည်မြှင့်တင်ပေးခြင်းနှင့် အရင်းအမြစ်များ
ဧဒင်ရိပ်မြုံသည် စတင်ဖွဲ့စည်းစဉ်ကတည်းက အရွယ်ရောက်ပြီးသော မသန်စွမ်းလူငယ်များကို နည်းမျိုးစုံဖြင့် စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ပေးလာခဲ့ပါသည်။ ဧဒင်ရိပ်မြုံသည်မသန်စွမ်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းဖြစ်နေသောကြောင့် ဤ အသင်းအဖွဲ့တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်ခန့်အပ်ထားသောဝန်ထမ်းများ၏ ၁၀% နှင့်ညီမျှသောဝန်ထမ်းဦးရေ ကို မသန်စွမ်းသူများအားခန့်အပ်လာခဲ့သည်မှာ ယနေ့အထိဖြစ်ပါသည်။ မသန်စွမ်းဆိုင်ရာအနြင်ဖွင့်သင်တန်း များဖွင့်လှစ်ပေးခြင်း၊ စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ပေးသည့်သင်တန်းများစီစဉ်ပေးခြင်းစသည်တို့ဖြင့်လည်း မသန် စွမ်းသူတစ်ဦးချင်းစီကိုသော်လည်းကောင်း၊ အဖွဲ့အစည်းများကိုသော်လည်းကောင်း စွမ်းရည်မြှင့်တင်ပေးနေပါ သည်။ မသန်စွမ်းမှုဆိုင်ရာစာပေးများပြုစုကာ ထုတ်ဝေခြင်း၊ ပြည်သူလူထုထံဖြန့်ခြင်း၊ မသန်စွမ်းဆိုင်ရာစာကြည့် တိုက်နှင့် အရင်အမြစ်ဌာနဖွင့်လှစ်စီစဉ်ပေးခြင်းတို့ကိုလည်း ဆောင်ရွက်ပေးနေပါသည်။
မသန်စွမ်းမှုဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများဖွ့ံဖြိုးတိုးတက်လာရန်အတွက် အခြားမိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများနှင့်ပူးပေါင်းကာ ကွန်ယက်များဖွဲ့စည်းခြင်း၊ အသင်းအဖွဲ့များစုပေါင်းတည်ထောင်ခြင်းစသည်တို့ကိုလည်းလုပ်ဆောင်နေပါ သည်။ မသန်စွမ်းမှုကဏ္ဍတိုးတက်ဖွ့ံဖြိုးရေးအတွက် သက်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာနများနှင့်လည်း လိုအပ်သလိုပူး ပေါင်းလုပ်ကိုင်နေပါသည်။
၂။ သုတေသနနှင့် အခြားစွန့်ဦးတီထွင်ခြင်း၊
ဧဒင်ရိပ်မြုံအနေဖြင့် မိမိ၏ဆယ်နှစ်ကျော် လူတိုင်းအကျုံးဝင်ပညာရေးဆိုင်ရာ စီမံကိန်းအကောင်အ ထည်ဖေါ်သည့်အတွေ့အကြုံကိုအခြေခံပြီး သုတေသနများကို နိုင်ငံခြားမှသုတေသီများ၏အကူအညီ ဖြင့် လုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ပါသည်။ မသန်စွမ်းမှုနှင့်ပတ်သက်သော လက်မှတ်ရသင်တန်းများကိုလည်းစတင် ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့ပါသည်။
ဧဒင်ရိပ်မြုံသည် မြန်မာပြည်တွင် မသန်စွမ်းသူများ၏အခွင့်အရေးများကို ကာကွယ်ပေးသောဥပဒေများ နှင့် မူဝါဒများပေါ်ပေါက်လာရန်အတွက် အရေးဆိုခြင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများကို ၂၀၁၃ ခုနှစ်ကတည်း ကစပြီးအစဉ်တစ်စိုက် ယနေ့အထိလုပ်ဆောင်နေပါသည်။
နေပြည်တော်ရှိလွှတ်တော်အမတ်များနှင့်တွေ့စုံဆွေးနွေးခြင်း၊ သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနမှ တာဝန်ရှိသူ များနှင့်တွေ့စုံခွသ့်တောင်းပြီး တင်ပြတောင်ဆိုခြင်း၊ အခြားမိတ်ဖက်အဖွဲ့များနှင့် ပူးပေါင်းပြီး ကိုယ်စား ပြုအရေးဆိုခြင်းများကို လိုအပ်သလိုလုပ်ဆောင်နေပါသည်။
ထိုသို့လုပ်ဆောင်ရန်အတွက် ဧဒင်ရိပ်မြုံ၏သံတမန်အဖွဲ့ကို မသန်စွမ်းဝန်ထမ်းများ၊ ဧဒင်ရိပ်မြုံ၏မသန်
စွမ်းကျောင်းသားဟောင်းများဖြင့်ဖွဲ့စည်းကာ အရေးဆိုခြင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများကို ဆောင်ရွက်နေပါ သည်။
၄။ ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခြင်းနှင့် လေ့ကျင့်ခြင်း၊
ဧဒင်ရိပ်မြုံအနေဖြင့် မသန်စွမ်းမှုနှင့်ပတ်သက်သော အရေးကြီးသည့်၊ ရှိသင့်ရှိထိုက်သည်ဟုယူဆထား သည့် စာအုပ်များကို မြန်မာဘာသာသို့ပြန်ဆိုပြီး ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေနေပါသည်။ ယခုအခါမသန်စွမ်းမှုဆိုင် ရာစာအုပ် (၃၀) ကျော်ထုတ်ဝေခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ ဧဒင်ရိပ်မြုံမှ အလင်းသစ်မသန်စွမ်းမှုဆိုင်ရာသုတရသ မဂဇင်းကိုလည်း အမှတ်စဉ် (၁၇) အထိထုတ်ဝေခဲ့ပါသည်။
ဧဒင်ရိပ်မြုံတွင်ဖွသ့်လှစ်နေသော စာကြည့်တိုက်တွင်လည်း မသန်စွမ်းမှုဆိုင်ရာ စာအုပ်စုစုပေါင်း (၂၀၀၀) ခန့်ရှိပါသည်။ မသန်စွမ်းမှုနှင့်ပတ်သက်သောစာတမ်းများပြုစုလိုသူများ၊ သုတေသနပြုလိုသူ များ၊ မသန်စွမ်းမှုကိုစိတ်ဝင်စားပြီးလေ့လာလိုသူများအတွက် အရင်းအမြစ်တစ်ခုဖြစ်လာအောင် ကြိုး စားဆောင်ရွက်နေပါသည်။
၅။ ပြည်တွင်းပြည်ပမိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
ဧဒင်ရိပ်မြုံသည်သက်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာနများ၊ ပြင်ပလုပ်ငန်းများ၊ အခြားအကျုံးဝင်သက်ဆိုင်သူများ အားလုံးနှင့်လက်တွဲဆောင်ရွက်နေပါသည်။ စီမံကိန်းများအကောင်အထည်ဖေါ်သည့်အခါ ဦးတည် ဒေသရှိ ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ပြည်သူလူထုနှင့်လည်း လက်တွဲဆောင်ရွက်နေပါသည်။ လိုအပ်သလို ဒေ သဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများနှင့်လည်း ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေပါသည်။
(၄) ဧဒင်ရိပ်မြုံရေရှည်တည်တံ့ ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
ရည်ရွယ်ချက်။ ဧဒင်ရိပ်မြုံအနေဖြင့် မသန်စွမ်းမှုကဏ္ဍတွင် ဆက်လက်ပြီးတက်ကြွစွာပူး ပေါင်းပါဝင်နိုင်ရန်အတွက် ဧဒင်ရိပ်မြုံရေရှည်တည်တန့်ခိုင်မြဲရေးသည် အလွန် အရေးတစ်ကြီးလိုအပ်နေပါသည်။
အကြောင်းရင်း။ ဧဒင်ရိပ်မြုံရေရှည်တည်တံ့ ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အောင်မြင်ရန်အတွက် အောက်ပါလုပ်သန်းရပ်များကို လုပ်ဆောင်နေပါသည်။
 အသင်းအဖွဲ့ စဉ်ဆက်မပြတ်တိုးတက်ရေးအတွက် လုပ်ဆောင်ခြင်း
 စမ်းစစ်ခြင်းနှင့် အထောက်အထားများဖန်တီးတည်ဆောက်ခြင်း
 ရန်ပုံငွေရှာဖွေခြင်းနှင့် စျေးကွက်ချဲ့ထွင်ခြင်း၊
ဧဒင်ရိပ်မြုံအနေဖြင့် လတ်တလောဖြစ်ပေါ်နေသောလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရန်အတွက် အတွေ့အကြုံရှိ သည့်ဝန်ထမ်းတစ်ဦးကိုဦးဆောင်စေပြီး မသန်စွမ်းမှုဆိုင်ရာသင်တန်းများကို ပို့ချပေးမည့်သင်တန်းဌာနကို ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင်စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။ မသန်စွမ်းမှုနှင့်ပတ်သက်သောလုပ်ငန်းများကို တိုးချဲ့လုပ်ဆောင်ရန် ကြိုးစားနေသည့် အရပ်ဖက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများ၊ ဝန်ဆောင်မှုပေးသည့်ကျောင်းဖွင့်ရန်ဆန္ဒရှိနေသောသူများ စသည်တို့ကို သူတို့လိုအပ်သောသင်တန်းများကိုပို့ချပေးနေပါသည်။
ဤအစီအစဉ်သည် ဧဒင်ရိပ်မြုံပရဟိတလုပ်ငန်းအတွက် ဝန်ဆောင်မှုပေးပြီးဝင်ငွေရှာဖွေပေးနေသည့်အစီအစဉ် တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါသည်။
ဧဓင်ရိပ်မြုံသည် အရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သည့်အတွက် အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုတွင်ရှိသင့်ရှိထိုက်သော အင်္ဂါရပ်များအပြည့်အစုံရှိပြီး ပုံမှန်သုံးသပ်သည့်အစီအစဉ်ရှိနေရန်အတွက် ပြင်ပကျွမ်းကျင်သူများကိုဌားရမ်းပြီး အဖွဲ့အစည်းတိုးတက်ရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများကို ပုံမှန်လုပ်ဆောင်နေပါသည်။
မိမိတွင်ရှိနေပြီးသားအဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာမးဝါဒများ၊ စည်းကမ်းအချက်အလက်များကိုလည်း အခြားအရပ်ဖက် ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများအား လိုအပ်သလို ထပ်ဆင့် ဖြန့်ဝေပေးနေပါသည်။
ဧဒင်ရိပ်မြုံသည် မသန်စွမ်းကလေူများလိုအပ်နေသောဝန်ဆောင်မှုများကိုပေးနေသည့် ပရဟိတလုပ်ငန်းဖြစ် သောကြောင့် ဝန်ဆောင်မှုပေးနေသော ကျွမ်းကျင်သူဝန်ထမ်းများ၏အရည်အချင်း၊ ကျွမ်းကျင်မှုကို အမြဲတိုး မြှင့်ပေးနိုင်ရန်အရေးကြီးပါသည်။ ထို့ကြောင့် နည်းမျိုးစုံဖြင့် ဝန်ဆောင်မှုပေးသော ကျွမ်းကျင်ဝန်ထမ်းများ၏ အရည်အသွေးကိုမြှင့်တင်ရန် ကြိုးစားရာတွင် ပြည်ပရှိမိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများ၏အကူအညီဖြင့် လေ့လာရေး သွားရောက်ခြင်း၊ သင်တန်းများ၊ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများ၊ ညီလာခံများကို ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပများသို့တက်ရောက် နိုင်ရန်စီစဉ်ပေးခြင်း၊ လုပ်အားလာပေးသော ပြင်ကကျွမ်းကျင်သူများ၏အကူအညီရယူကာ လုပ်ငန်းခွင်တွင်သင် ယူနိုင်ရန်စီစဉ်ပေးခြင်း စသည်တို့ဖြင့် မိမိဝန်ထမ်းများ၏အရည်အချင်းကို အနြဲအြှင့်တင်ပေးနိုင်ရန်လုပ်ဆောင် နေပါသည်။
ဧဓင်ရိပ်မြုံသည် ပရဟိတလုပ်ငန်းဖြစ်သောကြောင့် မိမိတို့၏အလှူရှင်များ၊ မိတ်ဆွေများ၊ မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်း များ၊ ပြည်သူလူထုနှင် အမြဲတမ်းဆက်သွယ်နိုင်ရေးကို ဦးစားပေးအစီအစဉ်တစ်ခုအဖြစ်သတ်မှတ်ကာဆောင် ရွက်နေပါသည်။ ဧဒင်ရိပ်မြုံ၏ကိုယ်ပိုင် ဝက်ဆိုဒ်၊ ဖက်ဘုတ်များကို အကျုံးဝင်သက်ဆိုင်သူများနှင့်အမြဲတမ်း အဆက်အသွယ်ပြုလုပ်နိုင်ရန်လုပ်ဆောင်နေပါသည်။ မသန်စွမ်းဆိုင်ရာလက်ကမ်းစာစောင်များ၊ အဖွဲ့အစည်း ဆိုင်ရာလက်ကမ်းစာစောင်များကိုလည်းပြုစုကာ ပြည်သူများထံဖြန့်ဝေထားပါသည်။
၅။ လုပ်ငန်းပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း၊ မှတ်တမ်းတင်ရိုက်ကူးခြင်း၊
ဧဒင်ရိပ်မြုံအနေဖြင့် မိမိတို့အကောင်အထည်ဖေါ်လုပ်ဆောင်နေသောစီမံကိန်းများနှင့်ပတ်သက်ပြီး မှတ်တမ်း တင် ရိုက်ကူးခြင်း၊ လုပ်ငန်းများကို ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းတို့ကို စီမံကိန်းအလိုက်သော်လည်းကောင်း၊ အဖွဲ့အ စည်းအနေဖြင့်သော်လည်းကောင်း ပုံမှန်လုပ်ဆောင်နေပါသည်။
ဧဒင်ရိပ်မြုံသည်ပရဟိတလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်သောကြောင့် ပြင်ပအလှူရှင်များ၏ပါဝင်လှူဒါန်းခြင်းဖြင့်လည်ပတ် နေသည့်လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ အဖွဲ့ကိုယ်တိုင်ကလည်း လုပ်ငန်းအတွက်လိုအပ်နေသော ရန်ပုံငွေရှာ ဖွေခြင်းကို တတ်နိုင်သလောက်ကြိုးစားလုပ်ဆောင်နေပါသည်။ ထိုသို့လုပ်ဆောင်ရာတွင် စျေးရောင်းခြင်း၊ ကံ စမ်းမဲဖေါက်ခြင်း၊ အဖွဲ့၏ပြက္ခဒိန်ထုတ်ဝေခြင်းစသည်တို့ကို လုပ်ဆောင်ပါသည်။
ဧဒင်ရိပ်မြုံပရဟိတလုပ်ငန်းပုံမှန်လည်ပတ်နိုင်ရန်အတွက် မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများ၏ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု သည် မရှိမဖြစ်လိုအပ်နေပါသည်။ ယနေ့အထိ နှစ်ပေါင်း (၂၀) ကျော်ဖြတ်သန်းလာခဲ့သည့်ခရီးစဉ်တွင် အလှူ ရှင်များ၊ စေတနာရှင်လုပ်အားပေးသူများ၊ မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများ၏ လက်တွဲပါဝင်မှုသာမရှိခဲ့ပါက ယနေ့အ ထိ ဧဒင်ရိပ်မြုံသည်ရှှု်သန်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။
၂၀၁၈ ခုနှစ်ကစပြီး တရုပ်ပြည်မှမိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သည့် Silver Lining Foundation (SLF) သည် ဧဒင်ရိပ်မြုံ၏အဓိကလက်တွဲဖေါ် ဖြစ်လာခဲ့ပါသည်။ သူတို့ထံမှ နည်းသစ်တစ်ခုဖြစ်သော Conductive Education (CE) ကိုလည်းသင်ယူခွင့်ရရှိပါသည်။
(က) ဧဒင်ရိပ်မြုံ တိုးချဲ့ဖွင့်လှစ်ခြင်း၊
ဧဒင်ရိပ်မြုံအနေဖြင့် ၂၀၀၇ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၁ ခုနှစ်အထိ ရန်ကုန်မသန်စွမ်းအရင်းအမြစ်စင်တာဖွင့်လှစ်ကာ မသန် စွမ်းမှုအမြင်ဖွင့်သင်တန်းများပြုလုပ်ခြင်း၊ မသန်စွမ်းတိုင်ရာစာအုပ်စာပေများပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခြင်း စသည်တို့ကို မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သော The Leprosy Mission International (TLMI) နှင့်လက်တွဲပြီးဆောင် ရွက်ခဲ့ပါသည်။
• မသန်စွမ်းမှုဗဟိုပြု ဖွံ့ဖြိုးရေးစင်တာ
ဧဒင်ရိပ်မြုံသည် မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သော The Leprosy Mission International (TLMI) ၏ပံ့ပိုး မှုဖြင့် မှော်ဘီမြို့နယ်၊ မြောင်းတကာစံပြကျေးရွာတွင် မြေကွက် ၃ ဧကနည်းပါးကိုဝယ်ယူကာ မသန်စွမ်းမှုဗဟိုပြု ဖွံ့ဖြိုးရေးစင်တာကို မသန်စွမ်းမှုနှင့်ပတ်သက်သော သင်တန်းများဖွင့်လှစ်မည့် သင်တန်းကျောင်းတစ်ခုအဖြစ် ၂၀၀၇ ခုနှစ်တွင်စတင် အကောင်အထည်ဖေါ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ထိုသင်တန်းကျောင်းတွင် အင်္ဂလိပ်သံရုံး၊ သြစတေးလျှသံရုံးနှင့် ဂျပန်သံရုံးတို့က လိုအပ်နေသော အဆောက်အဦးများကို ဆောက်လုပ်လှူဒါန်းပေးခဲ့ပါ သည်။ ယနေ့အထိ မသန်စွမ်းဆိုင်ရာသင်တန်းများပြုလုပ်ရန်၊ အခြားမိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများမှ သင်တန်းပြု လုပ်ရန်အတွက်ငှားရမ်းပေးခြင်းစသည်တို့ကိုဆေင်ရွက်နေပါသည်။
• လက်မှတ်ရ မသန်စွမ်းမှုဘာသာရပ်သင်တန်း
ဧဒင်ရိပ်မြုံမှ လက်မှတ်ရ မသန်စွမ်းမှုဘာသာရပ်သင်တန်းကို ၂၀၀၈ ခုနှစ်ကစပြီး (၃) နှစ်ဆက်တိုက်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ ပါသည်။ ဤသင်တန်း၏အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာ မသန်စွမ်းမှုကို အမြင်သစ်ဖြင့်ရှင်းလင်းစွာနားလည်သဘော ပေါက်ရန်ဖြစ်ပြီး မသန်စွမ်းခေါင်းဆောင်အချို့တက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါသည်။ လက်ရှိတွင်ပြန်လည်ဖွင့် လှစ်ရန်ကြိုး စားနေသော်လည်းမဖွင့်လှစ်နိုင်သေးပါ။
မသန်စွမ်းမှုနှင့်ပတ်သက်သောစာအုပ်များ၊ လက်ကမ်းစာစောင်များ၊ ဆောင်ပါးများကို အလျင်းသင့်သလို ဘာ သာပြန်ပြီး မသန်စွမ်းမှုကိုပြည်သူများပိုမိုသိရှိလာရန်အတွက်ရည်ရွယ်ကာ ဖြန့်စေပေနေပါသည်။ ဆက်လက်ပြီး ထုန်ဝေနိုင်ရန်ကြိုးစားနေပါသည်။
ဧဒင်ရိပ်မြုံတွင် မသန်စွမ်းမှုနှင့်ပတ်သက်သော စာအုပ်များ (အင်္ဂလိပ်နှင့် မြန်မာဘာသာ) ကိုတတ်နိုင်သ လောက်စုဆောင်းပြီး စာကြည့်တိုက်ပြုလုပ်ကာ လေ့လာလိုသူများမှ အခမဲ့ဖတ်ရှုနိုင်ရန်ဆောင်ရွက်ပေးနေပါ သည်။ မသန်စွမ်းဆိုင်ရာစာတမ်းပြုစုလိုသူများ၊ လေ့လာလိုသူများအတွက်ရည်ရွယ်ထားပါသည်။ မြန်မာပြည် တွင် ပထမဦးဆုံးဖွင့်လှစ်သော မသန်စွမ်းဆိုင်ရာစာကြည့်တိုက်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
ဧဒင်ရိပ်မြုံအနေဖြင့် မြန်မာပြည်တွင်ပထမဦးဆုံးထုတ်ဝေသော မသန်စွမ်းဆိုင်ရာမ၈ဇင်းကို ၂၀၀၈ ခုနှစ်မှစပြီး (၃) နှစ်ကြာထုတ်ဝေနိုင်ခဲ့ပါသည်။ အမှတ်စဉ်အားဖြင့် အမှတ်စဉ် (၁) မှ (၁၇) အထိ ထုတ်ဝေခဲ့ပါသည်။
• ဧဒင်ရိပ်မြုံ၊ ဟါးခါးလုပ်ငန်းစတင်ခြင်း။
ဧဒင်ရိပ်မြုံသည် ၂၀၁၄ ခုနှစ်ကစပြီး ရပ်ရွာအခြေပြုပြန်လည်ထူထောင်ရေးစီမံကိန်းကို ဟါးခါးမြို့နယ်နှင့် ထန်တလန်မြို့နယ်တို့တွင် ယနေ့အထိ (၅) နှစကျော်ကြာ အကောင်အထည်ဖေါ်ဆောင်ရွက်နေပါသည်။ ၂၀၁၉ ခုနှစ်မှစပြီး ဧဒင်ရိပ်မြုံပိုင်အဆောက်အဦးတစ်ခုကို ချင်းပြည်နယ်အစိုးရမှချပေးသောမြေကွက်ပေါ်တွင် ဆောက်လုပ်ပြီးစီးနေပြီဖြစ်သောကြောင့် မသန်စွမ်းကလေးများအတွက်ဝန်ဆောင်မှုပေးသည့် ကျောင်းကို ၂၀၂၀ ခုနှစ် မေလမှသပြီး ဖွင့်လှစ်ရန်ရည်ရွယ်ထားပါသည်။
• ကလေးမြို့၊ မသန်စွမ်းမှုဖွံ့ဖြိုးရေးရှေ့ဆောင်အဖွဲ့
၂၀၁၂ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၄ ခုနှစ်အထိ ကလေးမြို့နယ်၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးတွင် ရပ်ရါာအခြေပြုပြန်လည်ထူ ထောင်ရေးစီမံကိန်းကြီး (၂) ခုကို အကောင်အထည်ဖေါ်ခဲ့ပါသည်။ ထိုစီမံကိန်း၏လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်သော မသန်စွမ်းကလေးများအား ဝန်ဆောင်မှုပေးသည့်အစီအစဉ်ကို စတင်ခဲ့ရာ စီမံကိန်းပြီးမြောက်သည့်အချိန်တွင် လည်းဒေသခံဝန်ထမ်းများ၊ ရပ်မိရပ်ဖများနှင့် အသင်းတော်များ၏စုပေါင်းမှုဖြင့် ဆက်လက်လုပ်ဆောင်လာခဲ့ ကြရာ ယနေ့တွင် ကိုယ်ပိုင်မြေကွက်ပေါ်တွင် ကိုယ်ပိုင်အဆောက်အဦး၊ ကျောင်းလေးဖြင့် မသန်စွမ်းဆိုင်ရာ ပရဟိတလုပ်ငန်းများကို မသန်စွမ်းမှုဖွံ့ဖြိုးရေးရှေ့ဆောင်အဖွဲ့ (Disability Development Initiative – DDI) အမည်ဖြင့်ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေကြပါသည်။ ဧဒင်ရိပ်မြုံမှ တတ်နိုင်သည့်ကဏ္ဍများတွင် ဆက်လက်အကူ အညီပေးနေပါသည်။
• မာစီကမ်းလက်မသန်စွမ်းကျောင်း၊ ထားဝယ်။
ထားဝယ်မြို့ပေါ်တွင် ၂၀၁၉ ခုနှစ်ကစပြီးဖွင့်လှစ်ခဲ့သော ဤမာစီကမ်းလက်မသန်စွမ်းကျောင်းသည်လည်း ဧဒင် ရိပ်မြုံ၏စီမံကိန်းတစ်ခုဖြစ်သော — ၏နောက်ဆက်တွဲရလဒ်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ နယ်ခံလူထု၏တောင်းဆိုမှု၊ စိတ် အားထက်သန်မှုများကြောင့် ဧဒင်ရိပ်မြုံမှလည်း တတ်နိုင်သလောက် ဆက်လက်အကူအညီပေးနေပါသည်။
ရန်ကုန်မြို့တွင်ရှိသော အထူးကျောင်းများစုပေါင်းပြီး ၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင် အထူးပညာရေးဆရာ/မများမွေးထုတ်ရန် အတွက်ရည်ရွယ်ပြီး ဖွဲ့စည်းထားခဲ့ပါသည်။ ဤအသင်းအတွက်နည်းပညာရပ်ကို အင်္ဂလန်နိုင်ငံရှိ University of Wolverhampton (UOW) မှ ကူညီပံ့ ပိုးပေးနေပါသည်။ လိုအပ်သောငွေကြေးများကိုလည်း အင်္ဂလန်နိုင်ငံ သား စေတနာရှင် Mr. Richard မှ ပံ့ပိုးပေးနေပါသည်။ ဤအသင်းမှပို့ချသောသင်တန်းများကို လူမှုဝန်ထမ်း ဦးစီးဌာနမှလည်း အသိအမှတ်ပြုပေးပါသည်။ ဤအသင်းမှပို့ချပေးသောသင်တန်းများမှာ – မိတ်ဆက်သင်တန်း (Pre-Level-I)၊ ဆရာဖြစ်သင်တန်း (Level-I) နှင့် နည်းပြသင်တန်း (Level-II) တို့ဖြစ်ပါသည်။ ဤအသင်းကို ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်တွင်းအသင်းအဖွဲ့များမှတ်ပုံတင်ဌာနတွင် အသင်းအဖွဲ့မှတ်ပုံတင်ထားပါသည်။
ရပ်ရွာအခြေပြုပြန်လည်ထူထောင်ရေးကွန်ယက်၊ မြန်မာ (Myanmar Community Based Rehabilitation Network) ကို မသန်စွမ်းနှင့်ပတ်သက်သောလုပ်ငန်းများကို လုပ်ဆောင်နေကြသည့် ပြည်တွင်း/ပြည်ပအသင်း အဖွဲ့များမှစုပေါင်းပြီး ၂-၀၁၇ ခုနှစ်တွင် ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ လက်ရှိတွင် အသင်းအဖွဲ့အကြား သတင်းများဖလှယ်ပေးခြင်း၊ အတွေ့အကြုံများဝေမျှခြင်းတို့ကို ပုံမှန်ဆောင်ရွက်နေပါသည်။
ဧဒင်ရိပ်မြုံသည် မြန်မာနိုင်ငံ၏လူတိုင်းအကျုံးဝင်ပညာရေးအခြေအနေနှင့်ပတ်သက်သော သုတေသနများကို ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင်တစ်ကြိမ်၊ ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် တစ်ကြိမ် စုစုပေါင်း (၂) ကြိမ်လုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ ဤဆောင် ရွက်ချက်သည် ဧဒင်ရိပ်မြုံအတွက် အရေးကြီးသော ခြေလှမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် သုတေသနနှင့် မသန်စွမ်းမှုကဏ္ဍတွင်စိတ်ဝင်စားကြသော လူတစ်စုမှ ပူးပေါင်းပြီး ရွက်သစ် မသန်စွမ်းမှုနှင့်သုတေသနစင်တာကိုတည်ထောင်ကာ အခြေခံသုတေသနသင်တန်းများဖွင့်လှစ်နေပါသည်။ သုတေသနလုပ်ငန်းများကိုလည်း လုပ်ဆောင်နေပါသည်။